विरासत थाम्न ‘हेभिवेट’ को होड | Nagarik News - Nepal Republic Media
इलामको निर्वाचन क्षेत्र १ का वाम गठबन्धनका उम्मेदवार झलनाथ खनाल र क्षेत्र २ का सुवासचन्द्र नेम्बाङ । तस्बिर : भीम चापागाईं
१८ कार्तिक २०७४ १२ मिनेट पाठ
इलाम – आउँदो मंसिर २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जिल्लामा मुख्यगरी ३ ‘हेभिवेट’ को ‘भाग्यपरीक्षा’ हुँदैछ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता भलनाथ खनाल, पूर्वसभामुख तथा एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ र नेपाली कांग्रेसका नेता केशव थापा जिल्लामा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
रोचकचाहिँ के छ भने पटक–पटक जिल्लाबाट संसदीय निर्वाचनमा उठेकै व्यक्तिहरू पुनः तिनै पार्टीबाट सर्वसम्मत छानिएका छन् । खनाल र नेम्बाङ पार्टीको जिल्ला तहबाटै उम्मेदवारका लागि सर्वसम्मत भएका थिए । थापाको नाममा जिल्लामा सहमति नभएकाले कांग्रेस जिल्ला समितिले उनीसहित ४ जनाको नाम माथिल्लो तहमा पठाएको थियो । तर, कांग्रेसले जिल्लाका अन्य क्षेत्रका उम्मेदवार टुंग्याउनुअघि नै थापाले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो नाममा सहमति जुटाइसकेका थिए । खनाल प्रतिनिधिसभातर्फ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट उठेका छन् भने नेम्बाङ क्षेत्र २ बाट । थापा क्षेत्र २ बाट नेम्बाङकै मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा उठेका छन्।
तीनै नेताले यसअघि जिल्लाबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेकाले पनि उनीहरूलाई पुनः आफू उठेको क्षेत्रमा आफ्नो दलको बिरासत जोगाउने चिन्ता छ । जिल्लाबाट खनालले अहिलेसम्म ४ पटक संसदीय निर्वाचन जितेका छन् । नेम्बाङले ३ पटक र थापाले २ पटक । खनाल र थापा १–१ पटक आफ्नै क्षेत्रमा पराजित थिए । नेम्बाङले आफूले उम्मेदवारी दिएका तीनवटै निर्वाचनमा अहिलेसम्म विजय हात पारिरहेका छन् । तर, यो पटक जिल्लामा रहेका ३ निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन भएर २ वटामा सीमित हुँदा हेभिवेट आफ्नो ‘नयाँ मत’ कतापट्टि ढल्किन्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन् । तर, अन्य सबै उम्मेदवारजस्तै यी तीनै उम्मेदवार पनि भन्न चाहिँ छाड्दैनन् –सबै जनताले माया गर्नुभएको छ, चुनाव नजित्ने त कुरै छैन नि !
यसअघि जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र १ बाट चुनाव लड्दै आएका खनालले २०४८ र ०५१ सालका दुवै चुनावमा कांग्रेसका तोयानाथ भट्टराईलाई पराजित गरेका थिए । ०५६ सालको चुनावमा खनाल कांग्रेसका बेनुपराज प्रसाईंसँग पराजित भए । ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा उनै प्रसाईंलाई त्यही क्षेत्रमा हराएका खनालले ०७० सालको चुनावमा कांग्रेसका जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्यलाई पनि पराजित गरे ।
‘मलाई पटक–पटक यो क्षेत्रका जनताले धेरै माया गर्नुभएको छ, आउँदो चुनावमा पनि माया गरेर पुनः उहाँहरूको सेवामा लागिरहने अवसर दिनुहुनेछ,’ पटक–पटक तपाइँ मात्रै किन उम्मेदवार बन्नुपर्ने ? भन्ने जिज्ञासामा खनाल भन्छन्, ‘मैले देशका लागि र यहाँका जनताका लागि गरेको सेवाका साथै अब गर्नुपर्ने काम पनि उहाँहरूले मबाटै सम्भव देख्नुभएकाले उम्मेदवार बनेको हुँ । स्थानीय मतदाताको चाहनाको सम्मान गरेको हुँ ।’
खनाल बेलाबेला राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा पनि चर्चामा आइरहन्छन् । उनी राष्ट्रपति हुने चर्चा जिल्लामा अलि बढी नै चल्ने गरेको छ । ‘इलामबासी जनता निकै भाग्यमानी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको भाग्यमा अझै पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता देशका महत्त्वपूर्ण पद आफ्नो जिल्लाले पाउने लेखेको छ,’ खनालले भने, ‘मैले जनताबाट अनुमोदन हुने चाहनामा पूर्णबिराम लगाएको छैन तर कुनै पद र सुविधाका लागि अहिलेसम्म लागिनँ, अब पनि लाग्दिनँ ।’ उनी आफ्नो क्षेत्रमा यो पटक पनि आफू विजयी हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् ।
एमाले–माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका खनालको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा अहिले कांग्रेसका भूपेन्द्र कट्टेल चुनाव लड्दैछन् । २०३६ सालदेखि कांग्रेसमा क्रियाशील कट्टेलले अहिलेसम्म संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् । फिक्कल घर भएका उनी केही समयअघिसम्म कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापति थिए, अहिले क्रियाशील सदस्य छन् । उनी ०४८ सालमा तत्कालीन फिक्कल गाविस–८ को वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
कट्टेल आफ्नो क्षेत्रमा पहिलोपटक चुनाव लडेकाले खनाललाई आफूले पराजित गर्ने दाबी गर्छन् । ‘पटक–पटक एउटै मान्छे एउटै क्षेत्रमा चुनावमा उठ्नु निरंकुशता हो,’ उनले भने, ‘जनताले पनि अब आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा नयाँ अनुहार हेर्न चाहेका छन् ।’ कट्टेलले पूर्वप्रधानमन्त्री पनि अन्यजस्तै सामान्य व्यक्ति भएकाले लोकतन्त्रमा सानो–ठूलो व्यक्ति कोही नहुने बताए । उनले मानिसको पद रहेका बेला जिम्मेवारी धेरै हुने भएपनि चुनावमा व्यक्ति–व्यक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा अन्यको जस्तै सामान्य रहने जनाए । उनले कांग्रेसले २००७ सालदेखि कल्पना गरेको नयाँ संविधानअनुसार अहिले चुनाव हुन लागेको भन्दै संविधानको पालना र गाउँको विकासका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए ।
अहिले निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल पहिलाभन्दा फरक भएपनि वडालाई सबैभन्दा तल्लो विभाजनको इकाई मानिएकाले वडाध्यक्षले ल्याएको मतसँग आउँदो निर्वाचनको मत नजिक हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूबाट उठेका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ल्याएको मतलाई आधार मान्दा भने यो क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको मत कांग्रेसको भन्दा ११ हजार २ सय २४ ले धेरै छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा यो क्षेत्रका जम्मा ३९ वटा वडामा एमालेले ३० हजार १ सय ४८, कांग्रेसले २४ हजार ९९ र माओवादीले ५ हजार १ सय ७५ मत ल्याएका थिए ।
जिल्लाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र २ मा उम्मेदवारी दिएका एमालेका नेम्बाङ कांग्रेस नेता थापासँग दोस्रो पटक त्यही क्षेत्रमा चुनाव लड्दैछन् । नेम्बाङले ०५६ सालको निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङलाई पराजित गरेका थिए । पछि ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा थापालाई क्षेत्र २ मै नेम्बाङले पराजित गरे । नेम्बाङले ०७० सालको चुनावमा कांग्रेसका भेषराज आचार्यलाई पाखा लगाएका थिए।
‘नयाँ संविधान कार्यान्वयन, स्थिरता र समृद्धिका लागि मैले पुनः जनताबाट अनुमोदित हुने इच्छा गरेको हुँ,’ नेम्बाङले भने, ‘५ वर्षमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने योजनासाथ वाम गठबन्धन भएको छ । गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जनताले चुनावमा रोज्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।’ उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले गरेको विकासको प्रयास हेरेर र त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि पनि आफ्नो उम्मेदवारी जनताबाट अनुमोदित हुने विश्वास लिएको बताए ।
नेम्बाङका मुख्य प्रतिस्पर्धी कांगेसका थापाले ०५६ सालको चुनावमा जिल्लाको क्षेत्र ३ बाट एमालेका अगमप्रसाद बान्तवालाई पराजित गरेका थिए । ०६४ सालमा भने थापा क्षेत्र २ मा नेम्बाङसँगै पराजित भए । ०७० सालको चुनावमा थापाले जिल्लाको क्षेत्र ३ बाट एमालेका टेकबहादुर राईलाई पराजित गरेका थिए ।
जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या अहिले २ वटा हुँदा पहिला उनैले चुनाव जितेको क्षेत्र ३ को करिब आधा भू–भाग अहिले उनी उठेकै क्षेत्र २ मा परेको छ । ‘मैले क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी हुँदा गाउँको विकास र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जति विकास निर्माणका काम गरेको छु, अबको चुनावमा जनताले मलाई जिताउने आधार त्यही हो,’ थापा भन्छन्, ‘मैले भ्रष्टाचार गरिनँ, कसैको केही बिगारिनँ, मान्छेका आवश्यकता पूरा गर्न सहायता गरें । त्यसैले पुनः जनताबाट अनुमोदित हुनेमा ढुक्क छु ।’ थापाले गाउँको पूर्वाधार विकासलाई आफूले पहिला पनि रोजेको र अहिले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दिने बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा पर्ने ४२ वटा वडाका वडाध्यक्ष पदमा दलहरूले ल्याएको मत तुलना गर्दा वाम गठबन्धन ८ हजार ३ सय ४७ मतले कांग्रेसभन्दा अघि देखिन्छ । क्षेत्र २ मा एमालेको मत २७ हजार ७ सय १ छ। कांग्रेसको २६ हजार १ सय ९३ र माओवादीको ६ हजार ८ सय ३९ मत आएको थियो।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७४ ०९:२३ शनिबार
विरासत थाम्न हेभिवेट को होड